Wax walba aad uga baahan tahay inaad ka ogaato Isku Aadka wareega siddeeda ee Champions League oo Maanta la sameyn doono – Gool FM
(Neon) 10 Luulyo 2020. Waxaa markale dib u bilaaban doono bisha August tartanka ugu xiisaha badan horyaalada Yurub ee Champions League, tan iyo markii loo joojiyay ciyaaristiisa sababa la xiriira caabuqa Coronaviruses.
Maanta oo Jimco ah ayaa la sameyn doonaa Isku Aadka wareega siddeed dhamaadka ee tartanka Champions League, waxaana kulamada harsan loo ciyaari doonaa qaab ka duwan sidii hore, halka labo lugood la ciyaari jiray waxaa la ciyaari doonaa hal lug oo kaliya sababa la xiriira COVID-19.
Imise Kooxood ayaa xaqiijisay inay u gudbeen wareega Siddeeda?
Paris St-Gemrain, Atletico Madrid, RB Leipzing iyo Atalanta.
Imise kooxood ayaa sugaya inay u gudbaan wareega Siddeeda, kuwaasoo min hal lug soo ciyaaray?
Manchester City, Real Madrid, Bayern Munich, Chelsea, Barcelona, Napoli, Juventus iyo Lyon.
Siddee ayaa loo sameyn doonaa isku aadka?
Waxaa jiri doono saddex isku aad ee maanta la sameyn doono, kan koowaad ayaa ah wareega siddeed dhamaadka, kan labaad oo ah afar dhamaadka, iyo kan saddexaad oo lagu go’aamin doono kooxda martida loo noqon doono.
Goormee la ciyaari doonaa?
Kulamada siddeed dhamaadka oo hal lug oo kaliya la ciyaaro doono, ayaa la ciyaari doonaa inta u dhexeysa 12-ka iyo 15-ka August, halka afar dhamaadka la ciyaari doono 18-ka iyo 19-ka, iyadoo 23-ka isla bishaas ay ciyaari doonaan labada kooxood ee isugu soo harta kulanka finalka.
Halka la ciyaari doono kulamadii ka harsanaa wareega 16-ka ee tartanka UEFA Champions League 7-da iyo 8-da August.
Halkee lagu ciyaari doonaa dhamaan kulamada ka harsan tartanka Champions League?
UEFA waxay go’aansatay inay u wareejiso dhamaan kulamada ka harsan tartanka Champions League caasimada dalka Portugal ee Lisbon, sababa la xiriira in dalalka kale ay si ba’an ula ildaran yihiin faafitaanka caabuqa Coronaviruses.
Waxaa la sameyn doonaa 1:00 Duhurnimo ee saacadda geeska Afrika.
Waxaa lagu sameyn doonaa magaalada Neon ee wadanka Switzerland
Si kastaba ha noqotee, UEFA ayaa si buuxda u shaacin doonta kulamada iyo jadwalka saacado yar kaddib bilaabashada xafladda isku aadka.